Ideal-Lume Pro oo ay leedahay MediaLight Desk Lamp - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Bogga ugu weyn Ku habboon-Lume Pro by Siraaj MediaLight
The Ideal-Lume ™ Pro by MediaLight LED desk lamp ayaa loogu talagalay inay u adeegto xakamaynta aaladda kontoroolka ee jawiga midabaynta darajada midabaynta muhiimka ah. Waxaa loogu talagalay inay bixiso nalka hoose ee aagga hoose ee u dhigma soo-jeedinta CIE D65 ee lagu taliyay iftiiminta goobta marka laga shaqeynayo barnaamijyada fiidiyowga.
Dabool daboolka indhoolaha madow ee laga saari karo ayaa lagu darayaa si looga hortago ka-fiirsashada shaashadda ka soo baxa LED-yada. Dhimista ayaa la siiyaa si loogu hagaajiyo soo-saarka iftiinka sida loogu baahan yahay.
Adeegsiga badeecadani waxay u oggolaaneysaa u hoggaansamida ugu dambeysay SMPTE Heerarka iyo talooyinka loogu talagalay tixraaca xaaladaha bii'ada.
6500K - loo ekeysiiyay D65, oo soo bandhigtay Chip Colorgrade Mk2 SMD
Midab xasillan oo midab leh
Diirimaad degdeg ah
30,000 saacadood oo nolosha ah
Xagalka dogob 80 ° - 120 ° leh / dabool la'aan
Waxaa ka mid ah adabtarada Waqooyiga Ameerika 110v AC
3 Sannad Xaddidan oo Xaddidan